Muuri News Network » War Hada ah: Qasaarada dagaalka Puntland, Gaadiid la gubay, hub iyo Askar nolosha lagu qabtay..
War Hada ah: Qasaarada dagaalka Puntland, Gaadiid la gubay, hub iyo Askar nolosha lagu qabtay..
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helay dagaalka kasocda gobalka nugaal ayaa sheegaya in xabada ay sii xoogeysatay dagaalkana uu gaaray deegaano hor leh waxaana la isku adeegsanayaa hub culus sidoo kale waxaa jira qasaaro xoogan inkastoo aan tirada la sheegi karin.
Sidoo kale wararka waxaa ay sheegayaan in qasaaro xoogan la gaarsiiyay ciidanka puntland ee u baxay in ay laayaan alshabaabka duulaanka ku ah maamulkaasi waxaana la gubay gaadiid dagaal.
qof kamid ah dadka ku nool deegaanka Garacad, ayaa sheegay in Khasaaraha uu yahay mid labada dhinac ah, islamarkaana uu indhihiisa ku arkay ilaa Seddex Gaari oo ay leeyihiin Ciidamada Puntland oo la gubay, waxa uuna sidoo kale sheegay inay jiraan Ciidamo badan oo laga dilay Puntland.
qof kale oo isna nala hadlay ayaa inoo sheegay in Dhimashada Ciidamada Puntland ay gaareyso ilaa 14, halka dhaawacana uu sii caga-cageynaayo 18 oo u badan Ciidamii ugu horeeyay ee Dagaalka ku hormaray.
Sidoo kale, Dagaalka ayaa waxa ay maleeshiyadu ku qabteen Ciidamo ilaa 4 kuwaasi oo uu ka cararay gaarigii ay la socdeen.
Dhinaca kale, maleeshiyaadka ayaa waxaa iyaguna Dagaalka looga qabtay ilaa 6 maleeshiyo oo Laba kamid ah ay ku hubeysnaayen Saban iyo qoriga loo yaqaan PKM sida aan wararka ku helnay.